Las Vegas mponina Daniel Healey nanao ny tantara tamin'ny faran'ny herinandro, lasa aloha poker mpilalao mba handresy ny ara-dalàna, tena-bola an-tserasera ny fifaninanana eo amin'ny U inona no mahatondra tsara ho an'ny poker. Healey nihoatra ny 200-mpilalao an-tsaha mba handresy Farany Poker voalohany $10,000 alahady Fifaninanana.
Healey nanangona ny toerana voalohany loka $4,173 inona ny tsara mandresy ny tahan'ny amin'ny poker. Lalao farany mpitondra tenin'ny Joe Versaci hoy ny eny an-tsaha tonga ny 200-mpilalao satrony 45 minitra alohan'ny hetsika nisokatra.
Noho ny avo fangatahana, Ultimate Poker dia avo roa heny ny fahaiza-manao ny alahady Fifaninanana 400 mpilalao, izay mampitombo avo roa heny ny mety loka dobo ny $20,000. Healey hoy izy dia faly ny hanana toerana ao amin'ny tantara. "Efa maharaka ny vaovao farany sy ny poker bilaogy hatramin'ny zoma Mainty ny hira ary tena faly ny mandre fa ara-dalàna online poker eto," hoy izy.
Farany Poker no tompon'ny maro an'isa amin'ny Gara trano filokana casoola casino bonus ohne einzahlung. Ny tranonkala nanomboka tamin'ny 30 aprily casper sambo club poker mihazakazaka. Izany dia amin'izao fotoana izao ny vola ihany no tena online poker tranonkala any Nevada. Mpiloka tsy maintsy ho hita eo ny faritra Nevada, mba hilalao ao amin'ny tranonkala..